Tag: fanapahan-kevitry ny fividianana mpanjifa » Martech Zone
Tag: fanapahan-kevitry ny fividianana mpanjifa
Ny fiantraikan'ny Brand amin'ny Consumer Purchase fanapahan-kevitra
Alahady, Septambra 27, 2015 Alakamisy 5, 2015 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 2 minitra Efa nanoratra sy niresaka betsaka momba ny fanomezam-pahefana sy ny fanapaha-kevitra momba ny fividianana mifandraika amin'ny famokarana atiny izahay. Ny fanekena ny marika dia mitana andraikitra lehibe; angamba mihoatra ny noeritreretinao! Rehefa manohy manangana fahatsiarovan-tena amin'ny marikao amin'ny Internet ianao, dia tadidio fa - na dia mety tsy hitarika fiovam-po avy hatrany aza ny atiny, dia mety hiteraka fanekena marika izany. Rehefa mihabe ny fisianao ary lasa loharano azo itokisana ny marikao,